iOS 11 uye watchOS 4 yave kuwanikwa kurodha pasi | IPhone nhau
iOS 11 uye watchOS 4 yave kuwanikwa kurodha pasi
Luis Padilla | | iOS 11, Noticias, dzakawanda
Pave nemwedzi yakamirira uye anodarika gumi betas kusvika zuva rinotarisirwa nevazhinji rasvika: iOS 10 uye watchOS 11 inozowanikwa kurodha pasi pane inoenderana michina. Iwe haufanire kunge uri mune chero mugadziri kana yeruzhinji beta chirongwa, chero munhu anogona kuisa idzi nyowani vhezheni pamidziyo yavo kubva panguva ino chaiyo.
Chii iwe chaunofanirwa kuita kuti uise idzi nyowani vhezheni pane ako mafaera? Ndezvipi zvinhu zvitsva zvinounzwa neshanduro izvi? Munguva yese iyi nguva tanga tichiverenga zvinhu zvese izvi uye muchinyorwa chino takanyora ruzivo rwese rwakakosha kuti iwe uvandudze pasina matambudziko.
1 Midziyo inoenderana
2 Maitiro ekuisa iyo yekuvandudza
3 Chii chitsva muIOS 11
4 Chii chitsva muWatchOS 4
iOS 11: iPad Air 1 uye 2, iPad Pro (chero modhi), iPad mini 2 zvichienda mberi, iPad 2017, iPhone 5s zvichienda mberi.
watchOS 4: chero Apple Watch modhi
Maitiro ekuisa iyo yekuvandudza
Chinhu chekutanga kuisa iOS 11. Kune izvi iwe unogona kuwana yekumisikidza menyu ye iPhone yako kana iPad uye mukati meGeneral> Software yekuvandudza chikamu, iyo yekuvandudza kune iOS 11 inofanira kuoneka. Dai iwe wanga uchitoedza mabetas apfuura uye iwe une iyo Golden Master vhezheni yakaiswa, hapana gadziriso ichaonekwa nekuti yakanyatsofanana neiyo yakaburitswa neApple nhasi.
Paunenge iwe waisa iOS 11 enda kuWatch application pane yako iPhone Iine Apple Watch yakabatana uye muGeneral> Software yekuvandudza, iyo yekuvandudza kuOSOS 4. ichaonekwa.Sekare, dai iwe waive uchitova neGM vhezheni, hapana gadziriso inozoonekwa nekuti yakafanana neiyo yazvino.
Chii chitsva muIOS 11
Kuziva dzese nhau kuti iOS 11 inotisvitsa mune yayo vhezheni ye iPhone ne iPad, zviri nani kuverenga ichi chinyorwa chakakura iyo Isu tinokuudza iwe zvachose zvese zvinounzwa nezvitsva izvi nemifananidzo nemavhidhiyo Chiratidziro
Chii chitsva muWatchOS 4
Kuziva shanduko idzo watinounzira iwe unogona ona aya mavhidhiyo mauchadzidza nezve zvitsva mabasa atinogona kunakidzwa neichi chiitiko cheApple Watch yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » iOS 11 uye watchOS 4 yave kuwanikwa kurodha pasi
Mario burga akadaro
Ivo vedu vatove neGM, tikasiya iyo imomo, kozozovandudzwa zvinozoonekwa mumashure?
Pindura kuna Mario Burga
uye maseva akazara anoenderana anotora awa nehafu kudhanilodha…. grrrr
Ndine iyo gm mu iphone 6 uye muapp yekutarisa ndine iyo 1 ini handina kumbowana iyo 4, kana iyo gm kwete izvozvi….
Ndine mubvunzo une chekuita nezvekuvandudzwa kwewatch, inoshanda zvakafanana neiyo iPhone?
Ndokunge, mumidziyo miviri ini ndaive neyakagadziridzwa purogiramu yekumisikidza uye ndichishandisa iyo betas, ikozvino iko kwekupedzisira vhezheni payakabuda, bvisa ma profiles uye udzorere iyo iPhone ne iTunes kubva pakutanga nekumisazve vhezheni izere yeiyo 11 uye nekuisa.
Unogona here kuita zvakafanana newachi?
Ini ndinobvunza nekuti ndadzorera wachi asi haina kuisazve iwatchos11 kubva pakutanga senge pane iyo iPhone, pane chero nzira yekuzviita?
Jose Manuel F akadaro
Ndakagadzirisa yangu ipone 11s kusvika ios 5 uye ndiri kunetsekana nekufukidzwa, zvinoita hazvitore kufukidza pandanga ndisati ndanyatsobata 4g. Pane mumwe munhu akamboitika kwauri here?
Pindura kuna Jose Manuel F
Luis V. akadaro
Icho chokwadi chekuti muWatchOS 4 hauchakwanise kufamba raibhurari yemimhanzi yeiyo iPhone yaita kunge hombe shit. Kufambira mberi kubva pakuvandudza….
Pindura kuna Luis V.
Julius navarro akadaro
Handizive kana ndiri ini ndoga ndisina kunyatsocherechedza, kunyangwe ndisina kuverenga ichi "chitsva" chimiro… NeMusic App neWatchOS 4 Iye zvino Kutamba nzira, zvino unogona kukasira-mberi kana kudzosera kumashure nziyo urikutamba paSpotify, izvo zvausingakwanise kuita muWatchOS 3, asi chingomira / kutamba kana kugadzirisa vhoriyamu. Kwaziso
Pindura kuna Julio Navarro
Pokémon GO inogadziriswazve neshanduko diki kune mushandisi
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iOS 11